मध्यराती प्रचण्डको विस्तरामा किन पुगे बाबा रामदेव ? - jagritikhabar.com
मध्यराती प्रचण्डको विस्तरामा किन पुगे बाबा रामदेव ?
मध्यराती योग गुरु रामदेव प्रचण्डको विस्तरामा पुगेका छन् । बिहीबार अपराह्न काठमाडौं आइपुगेका भारतीय योग गुरू स्वामी बाबा रामदेव राती नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास खुमलटार पुगेका हुन् ।
उनी सहकर्मी आचार्य बालकृष्णका साथमा बिहीबार बेलुका प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका हुन्। रामदेवले खुमलटारमा अध्यक्ष प्रचण्ड, उनकी पत्नी सीतासहित प्रचण्डका परिवारसँग भेट गरेका छन्।
रामदेव र आचार्य बालकृष्णले बिरामी रहेकी प्रचण्डपत्नी सीतालाई स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन्। रामदेव र बालकृष्ण आचार्य खुमलटार पुगेर सीतालाई स्वास्थ्यलाभ दिएको तस्बिर प्रचण्डकी स्वकीय सचिव गंगा दाहालले सामाजिक सञ्जालमा राखेकी छिन्।
‘नेपाल भ्रमणमा रहनु भएका योगगुरु बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्णले अहिले खुमलटारमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डसङग भेट गर्नु भएको छ ।’ माओवादी नेता रमेश मल्लले पनि फेसबुकमा लेखका छन् ।
‘उहाँ दुबैजनाले आमा सीता दाहालको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी लिनुको साथै स्वास्थलाभको कामना गर्नु भएको छ ।’ उनले अगाडि लेखेका छन् । सिताको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नका लागि रामदेव प्रचण्ड निवास पुगेको बुझिएको छ ।